Ejiri LG Wing na ihuenyo ntụgharị na Snapdragon 765G | Gam akporosis
LG ka malitere a ngosi omume nke o kpughere Lg nku, ọhụrụ gị ọkara-elu arụmọrụ ama na-abịa na a kama peculiar n'usoro ihuenyo na-ekpuchi a abụọ ihuenyo, dapụtara na a na ihuenyo abụọ ọnụ.
Ngwaọrụ a bụ, ikekwe, ihe na-atọ ụtọ anyị hụtụrụla n'afọ a. LG ejirila ihu igwe eji agba ekwentị abụọ (eg: LG G8 na LG V50 ThinQ), mana sistemu ọhụụ ọhụrụ a na-eji eme ihe bụ akwụkwọ ọhụụ na nke ọ na-etinyebeghị. N’okpuru, anyị na-akọwa njirimara na njirimara teknụzụ nke ekwentị a.
1 Ihe niile gbasara LG Wing ọhụrụ nwere ihu igwe abụọ
Ihe niile gbasara LG Wing ọhụrụ nwere ihu igwe abụọ
Maka ndị mbido, LG Wing, na ilele ya anya mbụ, ọ dị ka nnukwu ihe. Ekwentị na-abịa na ihuenyo zuru oke nke nwere oke bezels dị warara, bụ nke a na-akpọpụta nke ọma n'akụkụ elu na ala, mana ọ bụ naanị ntakịrị.
Ngwaọrụ anaghị abịa notch ma ọ bụ perforation, ebe ọ bụ na O nwere igwefoto dị n'ihu nke agbakwunyere na modul na-apụ apụ n'oge ọ bụla anyị chọrọ iji ya; nke a bụ 32 MP (f / 1.9). N'aka nke ya, maka sistemụ igwefoto azụ, nke a dị okpukpu atọ ma dị na ụlọ akụkụ anọ nwere akụkụ gbara gburugburu yana ọkụ ọkụ LED abụọ. Kpọsị, ngwakọta azụ nwere nhazi ndị a: igwefoto igwefoto 64 MP nwere OIS na oghere f / 1.8 + 13 MP obosara obosara nke nwere ihu f / 1.9 na 119 Celsius + 12 MP ultra-wide angle with f / 2.2 na nlele anya 120 Celsius.
Na usoro nke ihu, ekwentị na-eji a 6.8-anụ ọhịa diagonal P-OLED FullVision isi panel O nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2.460 x 1.080 nke na-eme usoro 20.5: 9 ikwu "ugbu a", na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na njupụta pixel ya bụ 395 dpi.
LG Wing na swivel ngosi
Igwe nke abụọ bụ 3.9 sentimita asatọ, G-OLED teknụzụ ma nwee usoro ngosi ngosi 1.15: 1, yabụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ square. Mkpebi nke a bụ pikselụ 1.240 x 1.080, ebe njupụta pikselụ ọ na - ewepụta bụ 419 dpi. Nke a na - egosi mgbe ekiri ihuenyo enwetararị agbagoro wee debe ya, nke na - eme LG Wing ka ọ were udi "T" ma nye onye ọrụ ohere ị jiri ogwe abụọ ahụ n'otu oge.
Chipset processor nke edoziri na ngwaọrụ a Qualcomm Snapdragon 765G, nke dị isi asatọ ma jikọta ya na RAM nke 8 GB na ebe nchekwa nke 128 ma ọ bụ 256 GB (gbasaa na microSD ruo 2 TB na ọnọdụ abụọ), yabụ enwere ụdị ebe nchekwa abụọ dị. Batrị ahụ, ka ọ dị ugbu a, bụ ikike 4.000 mAh ma na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa site na USB-C (USB 3.1 Gen 1 at Kwekọrọ n'Ozizi) na ikuku.
Nhọrọ njikọ ekwentị gụnyere Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1 na mgbawa NFC maka ịkwụ ụgwọ na-enweghị ịkpọtụrụ. Sistemụ arụmọrụ ya na-abịa bụ Android 10 n'okpuru LG UX ma enwere onye na - agụ akara mkpịsị aka na ihuenyo na mgbakwunye IP54 ọkwa mmiri na-eguzogide mmiri na MIL-STD 810G asambodo ndị agha na-eme ka ọ bụrụ ihe akaebe niile.
IKIRU Isi: 6.8-anụ ọhịa FullHD + P-OLED FullVision na 2.460 x 1.080 pikselụ (20.5: 9) na 395 dpi / Secondary: 3.9-anụ ọhịa G-OLED, 1.240 x 1.080 pikselụ (1.15: 1), 413 dpi
Nhazi Ihe nhazi Snapdragon 765G
Ohere TERLỌ N'IME 128/256 GB (gbasaa site na microSD ruo 2 TB)
Gbanwee CAMERA Igwefoto igwefoto 64 MP nwere oghere OIS na f / 1.8 + 13 MP obosara nke nwere f / 1.9 na 119 Celsius anya + 12 MP Ultra-wide angle na f / 2.2 na 120 Celsius.
CAMERA N'IHU 32 MP (f / 1.9)
UMUAKA 4.000 mAh na Ndenye Ntanetị 4.0 + ngwa ngwa na ikuku na ikuku
OS A gam akporo 10 n'okpuru LG UX
Njikọ Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / Bluetooth 5.1 / GPS / NFC / 4G LTE / 5G
Atụmatụ ndị ọzọ In-Screen mkpisiaka Reader / Face Recoghọta / USB-C (USB 3.1 Gen 1 at Kwekọrọ n'Ozizi) / MIL-STD 810G Nguzogide / IP54 Waterproof Asambodo
Mbibi na ibu ibu 169.5 x 74.5 x 10.9 mm na 260 gram
E mepụtara LG Wing n'ụwa niile, nke mere eji eme ka mbata ya diri onye obula, nke oma. Agbanyeghị, ọ bụ South Korea, ụlọ nke ụlọ ọrụ ahụ, naanị mba ebe ọ ga-ebido ire na mbụ. E kpughebeghị ọnụego ya na ụbọchị ọpụpụ ya. Ọ na-abịa na agba agba abụọ: Aurora Gray (isi awọ) na Illusion Sky (isi awọ).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-eme LG Wing ka ọ bụrụ onye ọrụ na igwefoto nwere ike iweghachite yana enyo abụọ: otu n'ime ndị a bụ rotatable
Esi edozi discord Voice chat disconnection na gam akporo
Vodafone na Disney sonyeere agha: ha ga-ebido smartwatch maka ekeresimesi